हिन्दीको विरोध किन ?
हिन्दी, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी र अवधी संस्कृत भाषाकाभगिनीभाषाहरु हुन् । यी संस्कृतशखितभाषाहरु नेपाल–भारतको सीमावारी–पारी साझा देसी भाषाको रुपमाप्रयोग भएको पाइन्छ । प्रयोगकर्ताका लागियिनीहरु संगको लगाव स्वाभाविकहुन जान्छ । तर हिन्दीवाहेक अरुहरुले भौगोलिक संकीर्णतालाई चिर्नन सकेकाले सर्वव्यापी र सर्वग्राह्यहुन सकेनन् । भोजपुरी र अवधी जस्ता भाषाहरुमाकहाँ छन् उच्च स्तरिय र पठनीय ग्रन्थहरु ?यीभाषाहरुमाव्याकरणको पुस्तकहरु छन् ?कानुनस दर्शन, विज्ञान, मानवशास्त्रादिका रचनाहरु मैथिलीमा भेटिन्छन् ? नेपालमा छैनन् । संसारका कुनै विश्वविद्यालयमा?भाषा र साहित्यको विकास कृतिकारको व्यक्तित्वमा भर पर्दछ । भाषाप्रगामीप्रक्रमहो । चौधौं शताब्दीको अन्ततीर लन्डन र यसका वरीपरी अंग्रेजीकाचारवटा उपभाषिकाहरु थिए । ज्योफ्रे चौसर भन्ने लेखकले इस्टर्न डाइअलेक्ट –पूर्वमाबोलिने उपभाषिका) मा पुस्तकहरु लेखेर अंग्रेजीभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको स्वरुपप्रदान गरे । भानुभक्त रामायण लेखेर नेपालीभाषालाई भाषाबनाए । त्यसै गरी सन्त तुलसीदासले श्री रामचरित मानसको रचना गरी हिन्दीभाषालाई सम्पूर्ण आर्यावर्तको राष्ट्रिय भाषानिर्माण गरे । आजहिन्दी संसारकै तेश्रो सवैभन्दा बढी बोलिने भाषाभइसकेको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय स्वरुप ग्रहण गरी सकेको छ ।हिन्दीभाषाको विकास रोचक घटना क्रमहरु सँगप्रारम्भ भएको हो । श्री रामचरितमानसकाप्रमुख टिकाकार श्री हनुमानप्रसाद पोद्यारअनुसार सन्त तुलसीदासले रामायणको रचनाकाशीमाथाल्नु भयो । दिउँसो संस्कृतमा लेखिएकापद्यहरु रात्रिलुप्तभइहाल्थे ।सातदिन सम्म यो घटनाक्रम रहयो । आठौँ दिन रात्रिको बेला स्वयं भगवानशिव र पार्वती सन्त तुलसीदासलाई दर्शन दिए । तत् पश्चातउनलाई अयोध्यामागएर रामचरितमानसको रचनागर्न शंकर भगवानको आदेश भयो । यो कुराको स्वीकारोक्ति बालकाण्डको दोहा नं. १५ द्वारा स्वयं संसारकै कवि सिरोमणी सन्त तुलसीदासले गर्नु भएको छ ःसपनेहुँ साँचेहु मोही पर जौं हर गौरी पसाउ ।तौं फुर होउ जो कहेउँ सब भाषाभनितिप्रभाउ ।।कतिले तुलसीकृत रामायण अवधीमा लेखिएको हो भनेर भन्छन । तर भाषाशास्त्रीले हिन्दीभाषाका सम्पूर्ण संरचनाहरु यस महाकाव्यमाविद्यमान छन् भने कुरो सजिलै पतालगाउन सक्छ । तलकाचौपाइ पढौं –उलटि पलटि लंका सवजारी कुदि पडा पुनिसिन्धुमझारी श्री रामचरितमानसको रचना गरेर तुलसीदासले सम्पूर्ण आर्यावर्तलाई हिन्दीभाषा, साहित्य, दर्शन, धर्म, संस्कृति, संस्कार र जीवन पद्धति दिनुभएको छ । यी सब दिनलाई उहाँले कमविरोध खेप्नु परेको थिएन । ब्राम्हणहरुले तुलसीदासलाई पाखण्डी भने । रामायणलाईबाबाविश्नाथको मन्दिरमा राखेर परीक्षालिइयो । यसलाई चोरी गर्ने योजना समेत बन्यो । आजउहाँद्वारा प्रदत्तभाषाबोल्नुहुँदैन, पढ्नु हुँदैन भन्ने जो सुकै होस हाम्रो दुश्मनहो ।संस्कृत–शखितवाअन्यजुनभाषा मन लाग्छ बोल्नुस तर हिन्दीबोल्नै हुँदैन भन्ने कुरा एकदमै गलतहो । नेपालमाहिन्दीबोल्नु अराष्ट्रिय कामहो, भारतको विस्तारवादको टेवा मिल्छ । यावत कुरा अनापसनापमात्रै हो । वि.पी. को साहित्यिकयात्रा हिन्दीबाट भएको कुरा सर्व विदित छ । के पी भट्टराई, मनमोहनअधिकारी र अरु राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु हिन्दीबोलेपनि अराष्ट्रिय भएनन् । मधेसीहरुले बोले अराष्ट्रिय हुने ?मैथिलीभाषा–भाषीले विरगंजमाभोजपुरी नबोली मैथिलीबोले उपहासको पात्रमात्रै हुन्छ । भोजपुरी नआएहिन्दीबोल्दापापलाग्ला? अराष्ट्रिय कुरा होला? पहाडी नेताहरु गम्छा र धोतीमा सज्जिएर मधेसको भोट तान्नहिन्दीमा भाषण गर्न पाउने तर मधेसीले नपाउने ?ओलीजी र प्रचण्डजीहरु मधेस झर्दा वाभारत प्रवास गर्दा कुनभाषाप्रयोग गर्नु होला? मैथिली?भोजपुरी ?अंग्रेजी?वाहिन्दी?जोसुकैले हिन्दीबोल्लान । यो सबै नेपाल र भारत बीच रहेको अभूतपूर्व सदियौं पुरानो भाषायिकअवस्थाहो । हिन्दीबोल्न–सिक्नकुनै स्कूल–कलेज जानै पर्दैन । प्रमाण भारतीय प्र. म. मोदीज्यूले नेपालको संसदमा अभिभाषण गर्दा पहाड–हिमालकाप्रतिनिधिहरुले थपडी पिटेको पिटै गरे । प्रचण्डजी सबै भन्दा बढी, पक्कै पनिहिन्दी भाषण बुझेर होला । गणतन्त्र आएपछि खासगरी मधेसमाहिन्दीको साइत जुडेको छ । सुसुप्तअवस्थामा रहेका वामपन्थी र उत्तरपन्थीमधेसी हिन्दी लेखकहरु जुर्मुराएका छन् । उनकाकलमहरु कविता, कथा र अन्य कृतिहरुले सिर्जन तीर लम्की सकेका छन् । संसारमाजहाँपनिगलतपवृतिहरु हावीभएकाहामी पाउँछौं । मधेस अच्छुतो छैन । नेपालीकाँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीमालागेका मधेसी नेताहरु जानीनजानीहिन्दीको विरोध गर्नु तर्क संगतहोइन । मधेसले सोच्ने बेलाआएको हो । लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लेखनाथपौड्याल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, बालकृष्ण सम जस्ता स्रष्टाहरु मधेसले किनजन्माउन सकेन ?मधेसीलोकसेवाआयोगमाकिन फेल हुन्छ ?मधेसका मानिसहरु विवादमा पर्नुभन्दा राम्रो भाषाआयोग गठन गरी एउटा निष्कर्षमापुग्नुपर्दछ।मधेसमाभाषाविदहरुको खडेरी परेको छैन् ।नेपाल र भारतकामानिसहरु एकै भाषा परिवारका छन् ।हामी साझा संस्कार र संस्कृतिबोकेका जनताहरु हौं । तसर्थ हिन्दीभाषा साहित्यमा लुकेका ज्ञान गंगामा डुबुल्की लगाउनश्रेयकर हुन जान्छ । हिन्दीलाई मधेसमामात्रै नभई देशमै आधिकारिक कामकाजको भाषाबनाउनु पर्दछ । मधेसमा सवै धर्म, जातजातिको ज्ञानार्जनको माध्यमहिन्दीहुनु पर्दछ । नरुचाउनेले अन्यभाषामा ज्ञानार्जन गरे यो उनीहरुको मौलिकअधिकार हो